Uummata Oromoof filmaata Maalii Qabaa? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooUummata Oromoof filmaata Maalii Qabaa?
Damee Boruu tiin, Waxabajjii 27, 2018
Qabsoon bilisummaa hojii uummata bal’aa itti malee kan dhunfaa nama tokko miti. Qabsoon bilisummaa dhunfaa nama muraasaan illee tahuu hin danda’a. Namni tokko hooganaa tahee daandii qabsoo qajeelaa kan galmaan gahuu hordofsiisuu ykn dabsee galma isaa utuu hin gahiin akka turu gochuuf dandeetti qabaachuu ni danda’a taha. Haalli murteessaan garuu hojii uummata bal’aan raawwatamu akka tahee ifa jira. Qabsso bilisummaa Uummatni Oromoo jaarraa tokkoo ol godhaa dhufe yaroo humna horatee, Uummata Oromoo guutuun ammatee ititaa jiru injifannoo isaa corofeen harkaa butatee waan fiigaa jirtu fakkaata. Warri goboccor raqaa nyaachuuf fiigaa jiran karabaataa mormatti marataniii karaa maraan bakka jiranii irraa itti marsaa jiru. Uummatni itti dhiige, itti du’e, itti waxxalame, itti hidhame, itti saamame, itti jiruu fi ireenyi isaa badade akkuma warra kana duraa barame sii jaalananna, siif dhaabbanna, siif hojjenna jechuudhaan burjaajesaa jiru. Ayyan- ilaalatoonni dantaa uummataaf yaadaa fi yaaddoo tokko hin waan hin qabneef mootummaa dabarsanii warra kanaa laachuun yakkama hammaa fi badii guddaa biyyaa fi uummata irratti akka raawwatan ayyaana kennuufii dha.
“Baabura jalaalaa” kan jedhu baabura kijibaa ti. Qeerroo Oromoo Kafaalloo Tafarraa fi warra miila isaa lamaan kutee hiraarsaa ture wal itti dbalamaa baabura jaalalaa kana yaabadhaa yaroo jedhamu ammam amma madhaa uummataatti qaladan agrsiisa. Inni ajjeessee fi inni du’e waan wal jaaladhaa jedhameef wal jaalachuu hin danda’u. Aadaa Oromoo keessatti yoo namni tokko nama ajjeesse seeraa gaddaan gumaa baasee araarri ni bu’a. Garuu namni lubbuu baase kun miila tokkoon karaa irra dhaabbate kadhatee gumaa baasa malee waan qabeenya qabuuf horii mataa isaa illee baasuu hin danda’u. Badii godhee jirutti akka gaabuu fi gadduuf yoo tahu. Kan hafe immoo isa irraa barata. Hammeenya mootummaan EPRDF uummata biyyaa Itoophiyaa keessatu Uummata Oromoo irratti raawwate heeraa fi seeraan qulqullaa’ee yoo warri badii kana fakkaatu hojjete itti gaafattaman malee waliin tarkaanfachuun rakkisaa dha.
Baabura jaalalaa Dr. Abiyi jedhu kan agrsiisu warri nama ajjeessuu bare kunoo kaleessa isa ajjeessuuf yaallii akka gochaa jirani dha. Kan odeefamu dhugaa yoo tahe lubbuu isaa kan baraare Qeerroo Oromootu lubbuu ofii dabarsee laachuudhaan boobbii nama darbuuf ka’e harkatti qabatee ofii wareegamuudhaan jedhama. Caasaa mootummaa biyya Impaayera Itoophiyaa keessa jiru waggaa 27 kan diriirsee of harkaa qabu TPLF akka tahe dagatamuu hin qabu. Dr. Abiyi isaan wajjin waan tureef caasaa isaanii kana barchee beekuun ni mala. Yaroo hundaa kan dagachuu hin qabne amma aangoo sana irra jiru itti Yihuudaan tokko akka isa wajjin maaddi itti dhiyaachaa jiru dha. Nama ajjeessuun rakkinni furamuu dana’u tokko hin jiru.
Shorkokeesitoonni TPLF nama ajjeessuuf shira kana fakkaatu raawwatan abbaramuun qofaa hin gahu. Seera itti dhiyaatanii adabbii gahaas argachuu qabu. Baabura jaalala dhaadanno jedhamu kun shorkokeesitoota kana hundaa baatee utuu deemuu araarrii fi jaalalli dhugaa argamuu hin danda’u. Hammeenyii fi dararmni biyya sana keessatti taheef komishiin tokko dhaabbatee haala kana qorratee akka gara tokko itti deebi’uu gochuun barbaachisaa dha. Waan kana irraa hafe akkuma bara Dargii dhiiga tokko malee Itoophiyaa haa durstu” yaale minim demi Itoophiyaa tiqidam” jechuun dhaadannoon eegale dhiigni dhangala’ee dhaabbachuu akka dadhabe agaree jirra. Dhaadannoo miidhagaa gura namaatti itti tolu tareesaa uummata gowwoomsuun hojii rakkasa dhugaa irraa fagaate dha.
Sababni isaa aadaa warra Habshaa keessatti yoo soban malee laga tokko cee’uun hin danda’amu. Aadaa Habashaa keessatti kan muudamee baayyee farsama. Nama akka Haayile Selaassie faarsamu takkaa jireenya kooti dhaga’ee hin beeku. Akka ergamaa Waaqaa tahee dhaloota Yuudaa irraa dhufee waan himamuuf yaroo darbu namni dhaabbatee hin ilaalu. Amma hin darbutti lafati gombisamuu qaba. Umurii waggaa saddeetamaa booda aangoo irraa buusanii akka hindaaqoo morma hudhanii ajjeessanii bakka owwala isaa illee namni beeku hin jiru. Mangistuu Haayile Mariyam nama dhaloota tokko biyyaa irraa ajjeessee fixxeef faaruun godhamaaf ture lakkoobsa hin qabu. Yaroo Malasaa Zeenawii Mangistuu Haayile Mariam caalaa nama ajjeessu danda’uu isaa argani inni immoo beekumsa irraa darbee mul’ata qaba jedhanii sagadaaf turan. Amma immoo kunoo Dr. Abiyiin “Nabiyuu” , “ Muusee” jechuu jalqabanii jiru. Akka warra isa duraa abbaa irree tahuuf nama isa dura dhaabbatu hundaa ajjeessuun dirqama isatti akka tahu mamii hin qabu. Yoo inni isaan hin ajjeefne immoo isaan isa ajjeessu. Warra Habshaa wajjin kaachuun ilma Oromoof hirmii dha. Akkuma wal ganaa oolan isas akka ganan beekuu qaba. Kan isa baasuu fi isa utubuu danda’u uummata Oromoo itti hirkachuu fi gaaffii uummata Oromoof deebii qabuubsaa kennuu dha. Obbo Lammaa fi Dr. Abiyi qabsoo uummatni Oromoo dhiiga itti dhangalaasee asiin gaheen farda ittiin nagadna yoo jedhan waan isaan hin baasu natti hin fakkaatu.
Impaayyera Itoophiyaa keessatti rakkinni uummata Oromoo Habashootan cabee garboomuu qofaa miti. Rakkinni guddaan qabnu akka olaatuu waliin jiraachuuf aadaan keenya baayyee wal morma. Aadaa isaanii keessa nagaan waliin jiraachuun hin jiru. Warra Habashaaf aangoon waan hundaa caala. Aangoo irratti obbolaan illee wal ajjeesuu, summii wal nyaachisu, wal ganu, wal dhabamsiisuuf shira wal irratti hoojjetu. Uummatni isaaniis nama aangoo qabu akka Waaqa biraa dhufee godhanii fudhatu. Jilbeefatanii dubbisu. Mataa irratti baatanii adeemu. Itti shiminu. Kun hunduu nama aangoo irra jiru akka dogonoruuf dhiiba irratti godha. Warra isa ajjeessuuf shira xaxu kana yoo of irratti hin ajjeefnee of darbee du’uuf waan deemuuf utuu hin fedhiin ajjeessuu jalqaba. Sana booda ajjeechaan bakka itti dhaabbatu hin jiru.
Aadaa Oromoo keessatti Abbaa Gadaa dandeetti, beekumsaa fi oggummaa qabuun seera gadaan uummatan filama. Hawwaasa Oromoo keessatti Waaqaa gadii fi Abbaa Gadaa ol namni aangoo qabu hin jiru. Garuu uummatni kabajaa fi jaalalli Abbaa Gadaaf qabu waan dhugaa dhaabbatuu fi dhugaa dhubatuuf malee waan aangoo isaan caalaa qabuu miti. Kana malee Abbaan Gadaa isaan keessa nama tokko malee kan Waaqa biraa ergame jedhee uummatni Oromoo hin fudhatau. Walii gala aadaan warra Habashaa farra demookraasii waan taheef waliin jiraachuuf rakkina argaa jirra. Kanaafuu dhimma isaanii keessa hin gallu, isaan illee dhimma keenya keessa galuu yoo baatana nagaa waliif laatna. Namni fageesse ilaaluu fi biyya bulchuu barbaadu haala kana hubatee gara tokkotti yoo murtii irratti gochuun danda’ame gara fuula duraa waliin tarkaanfachuun ni danda’a taha.
Uuummata Oromoof aaraarri fi filmaatni kan argamu yoo qabsoon abbaa biyyummaa kumaatan dhiiga itti dhangalaase bakkaan gahame duwwaa dha. Kanaafuuu baaburri jaalala Habashaa isuma kana duraa argaa turee. Itti dabalamuun haqa kuummata keenyaa dhoksee gara nu dabrsuuf malee galma keenyaan kan nu gahu miti. Galma keenya gahuuf Fincila Xumura Garbummaa bakkaan gahuuf WBO fi QBO wajjin qabsoo hadha’aa goonu jabaannee itti haa fufnu!
Uummata isaaf jecha, jireenya ofii dhiise Nimoonaa Urgeessaa bara Sochii #FXG_OromoProtests fiininaa ture sana bara…